परिचय – Asian Life Insurance
एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.
एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. बीमा ऐन २०४९ अर्न्तर्गत बीमा समितिबाट २०६४ फागुन १५ गते बीमकको रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरी २०६४ चैत्र २१ गतेदेखि संचालनमा आएको छ । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी जीवन बीमा व्यवसायमा ६ वर्षपछि बीमा समितिबाट जीवन बीमा गर्ने बीमकको रुपमा काम गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने पहिलो जीवन बीमा कम्पनी हो ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु ५ अर्ब रहेको छ । चुक्ता पुँजी रु. २ अर्ब १ करोड रहेको छ । जसमध्ये संस्थापकहरुबाट ७०% र कम्पनीका कर्मचारी लगायत सर्वसाधारण नेपालीहरुबाट ३०% गरी पुरा गरिएको छ ।
कम्पनीमा ९३ जना संस्थापक शेयरधनीहरु मध्ये २ संस्थागत संस्थापक शेयरधनीहरु र ९१ जना व्यक्तिगत संस्थापक शेयरधनीहरु रहेका छन् । संस्थागत संस्थापक शेयरधनीहरुमध्ये नेपालका प्रसिद्ध फाइनान्स कम्पनी तथा विकाश बैंकहरु रहेका छन् ।
संस्थागत संस्थापक शेयरधनीहरु :
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्स लिमिटेड, ललितपुर
संचालक समितिका सदस्यहरु र अन्य व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरु अन्य पेशा तथा व्यवसाय जस्तै : बैंकहरु बीमा कम्पनीहरु, बित्तीय संस्थाहरु, प्राइभेट संस्थाहरु आदिमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरिसकेका कुशल व्यक्तिहरु रहेका छन् । केही शेयरधनीहरु सरकारी सेवामा उच्च तहमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
कम्पनीको स्थापनाकाल देखिनै कम्पनीले बीमितको सन्तुष्टिलाई बिषेश ध्यान दिदै आएको यस कम्पनी पेशागत तवरबाट बीमा व्यवसाय संचालन गर्न र सबै किसिमका ग्राहक वर्गहरुलाई उचित तवरले व्यवहार गर्न तथा उच्चतम सेवा प्रदान गर्न आवश्यक आधुनिक प्रविधियुक्त रहेको छ ।
यस कम्पनीले जर्मनीको हनोभर रिसँग पूनर्बीमा गरेको छ । विश्वको तेश्रो ठूलो पूनर्बीमक उक्त कम्पनी आर्थिक रुपले सवल र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा परिचित छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल पूनर्बीमा (नेपाल रि) सँग समेत पूनर्बीमा सम्झौता गरिएको छ ।